Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » रविको पुर्वश्रीमती लेख्छिन – एकपटकको बाबु सधैंको बाबु हो, ‘पूर्वश्रीमान’ भनेजस्तो ‘पूर्वबाबु’ वा ‘पूर्वछोरी’ कहिल्यै हुँदैन
रविको पुर्वश्रीमती लेख्छिन – एकपटकको बाबु सधैंको बाबु हो, ‘पूर्वश्रीमान’ भनेजस्तो ‘पूर्वबाबु’ वा ‘पूर्वछोरी’ कहिल्यै हुँदैन
अमेरिकाबाट पूर्वपति रवि लामिछानेका नाममा… भन्दै देशकै चर्चित अनलाइन खबरमा वर्तमान परिवेशलाई उल्लेख गर्दै पूर्व श्रीमती इशा लामिछानेले आफ्नो लेख प्रकाशित गरे पछी रबी लामिछनेले त्यसको कडा जवाफ फर्काएका छन साथै उनले आफु बिरुद्द निरन्तर प्रहार भए पछी अनलाइन खबरका सम्पादक प्रती फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कडा टिप्पणी गरेका छन । उनले पूर्वपत्नीका बारेमा पनि केहि कुरा फेसबुकबाटै खुलाएका छन् । ईशाले लेखेको लेखमा उनले जवाफ दिएका छन् । उनले जरुरी टि.प्प.णी भन्दै अनलाईन खबरका सम्पादकसँग किशोरको कनेक्सन पनि खुलाएका हुन ।
सुरुमा उनकी पुर्व श्रीमती इशा लामिछानेको अनलाईन खबरमा प्रकाशित लेख जस्ताको त्यस्तै :
रवि लामिछाने मैले २५ वर्ष सहयात्रा गरेका श्रीमान मात्र होइन, मेरा दुई छोरीका बाबु पनि हुन् । हाम्रो डिभोर्स पछि दुई छोरीहरुको एक्लो अभिभावकत्व मेरो काँधमा आएको छ ।
Rabi lamichhane & Isha Lamichhane
डिभोर्सपछी हाम्रो बाटो अलग-अलग भयो । उनले नेपालमा नयाँ सं*सा*र बसाले । म अमेरिकामा छोरीहरुको स*हा*रामा र उनीहरुलाई सहारा दिएर बाँचिरहेकी छु ।
‘डि भोर्सका क्रममा रविले मसित केही कागजी र केही मौखिक प्रतिवद्धताहरु गरेका थिए । त्यसअनुसार अमेरिकामा रहेको घरको मासिक किस्ता भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी उनले लिएका थिए । तर, उनले नियमित रकम नपठाएपछि तीन महिना अगाडि बैंकले घर लिलामीको नोटिस निकाल्यो । त्यसपछि उनले पठाएको केही पैसा र म आफैंले बाँकी रकम जोहो गरेर बैंकको किस्ता क्लियर गरेँ । आगामी दिनमा उनले प्रतिवद्धता पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएकी छु । अन्यथा, मैले पनि कानूनी उपचारको खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
रवि पक्राउ परेको खबरले अमेरिकामा हामी आमाछोरी चि*न्ति*त बन्यौं । खासगरी ठूली छोरी निकै दुःखी थिइन् । मलाई पनि ननिको लाग्यो ।तर, यतिबेला नेपालमा रविलाई अर्को संकटले घेरेको छ । आत्महत्या दुरुत्साहनजस्तो गम्भीर मुद्दा लागेर पक्राउ परेर हालै पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुद्दाको फैसला भएको छैन ।
हिजो बुवाको मुख हेर्ने दिन । अघिल्ला वर्षमा छोरीहरु यस दिन कति उत्साहित हुन्थे । मेरा छोरीहरुका पितालाई ‘फादर्स डे’ को शुभकामना छ । आफ्नो संसारमा भुलेर छोरीहरुलाई बि*र्सि*यौ भने पनि छोरीहरुले तिमीलाई कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन् । किनकी एकपटकको बाबु सधैंको बाबु हो । ‘पूर्वश्रीमान’ भनेजस्तो ‘पूर्वबाबु’ वा ‘पूर्वछोरी’ कहिल्यै हुँदैन ।
देशको चर्चित अनलाइन अनलाईनखबरले रवि लामिछानेको पूर्वपत्नीको लेख छापेपछि रविले त्यस्को जवाफ सामाजिक संजाल फेसबुकबाट दिएका छन् । । उनको स्ट्याट्स जस्ताको त्यस्तै :
अरुण जीको अन्लाईन खबरले आज अमेरिकाको घरको पैसा तिरेन भनेर समाचार लेखेछ, पहिलापनि चौथो सम्बन्ध भनेर हेडलाईन बनाएको थियो।कस्को कति वटा सम्बन्ध भनेर गन्ने इक्छा भए मलाई भेट्नु होला सम्पादक ज्यु, जिब्रो टोकेर फर्किनु हुनेछ। कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । अब यहि खबरमा थप मसला हालेर नागरिकको शुक्रवार भन्नेले लेख्छ। त्यसपछि उहाँहरुको ने.ट्वो.र्कका सारा अनलाइनमा जान्छ। यति धेरै किन पछि लाग्नु हुन्छ तपाईको सम्पादकिय क्षमता मेरा वि.रु.द्ध नै खर्चने हो आजीवनरु अब यस्को जवाफ कति कुशलताका साथ लेख्नुहुन्छ होला।
अनि यति भनेकोमा मैले कुन आपत बेहोर्नु पर्ने हो, त्यो थाहा छैन।अर्को कुरा भा’व’ना’त्म’क नाता नमरेको भए आफ्ना सन्तानका बाबू हिरासत बाट छुट्ना साथ केहीले उचाल्दैमा बदनाम गराउनु पर्ने के हतारो आइलाग्यो ईशाजी लाई ? के यी सब कुराका लागि उपयुक्त मौका यहि थियो ? मैले गलत गरे कानुन छैन ? छोरीहरुको अधिकार समेत उहाँ आफैले लिन खोज्नु भएकोले सो अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी बाटोको खोजी भैरहेको मात्र हो जुन कुरा उहाँलाई, उहाँका दाईलाई र मेरा छोरिहरुलाई थाहा छ।
कोहि देश भरी मुद्धा हाल्ने अभियानमा लाग्ने,कोहि पुराना कुरा उचाल्ने !! सरहरुको अरु काम छैन होला, तर प्लिज मलाई यति धेरै दुख नदिनुस। हामी सबै आ -आफ्नो सं’सा’रमा खुशी छौ। ईशा जी अमेरिकामा खुशी साथ बसिरहनु भएको छ, म आफ्नो नयाँ जिवनमा खुशी छु, छोरिहरु सङ प्राय हरेक दिन कुरा हुन्छ। तपाईंलाई चाहिँ अब के चाहियो । म आज बाट कार्यक्रम शुरु गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ केही भए लेख्नु होला। नत्र पुराना र टुंगो लागेका मु.द्दा उठाएर कायरताको उदाहरण नदेखाउनु होला । यो अपिल ईशा जी,अरुण जी लगायतका जीहरुलाई । धन्यवाद।